Zarganar of Burma & Burmese People: ကေအင်ဒီအို သီချင်း
ဗိုလ်ချုပ် ဇာတ်ညွှန်း နဲ့တော့ မဆိုင်ပါဖူး။ဒါပေမဲ့သမိုင်းမှာ ဒီလို သီချင်းမျိုးပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးတယ်
ကေအင်ဒီအို စောဘအေး ရေးခဲ့တာပါတဲ့။ဖတ်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။
ပြည်ထောင်စုရယ် မောင်ရင်နု ရယ် ဆိုရှယ်လစ်ရယ် ဒင်းတို့ရဲ့ကျင့်ကြံပုံတွေ ယုတ်မာလွန်းလျတယ်
တာရှည်ဝါးရင် ကြာရှည်ခါးမယ်အရေခြုံများရယ် ဒင်းတို့နဲ့တစ်နယ်စီ တစ်ပြေစီဝေးဖို့ကွယ်
မွန်ကရင်တို့ ပအိုဝ်ပြည်နယ် ကော်သူးလေး
ခေါင်းဆောင် အောင်ဆန်းတို့နဲ့တင်ထွတ်တို့ပါ သေကံကြုံရှာတယ်။ကိုယ့်ဗမာ ကိုယ်ချင်းသတ်ကာ
မင်းအာဏာ လုတဲ့ပါတီရယ် အော် ဖား ဖား ချင်း ငါး ငါးချင်း မြိုစားတဲ့ကိန်း ဆိုက်ပေါ့ကွယ်
လူထုကိုလှည့်ဖျားကာ ချေးငွေ ဥစ္စာ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှာကာ သန်းသန်း ကုဋေကျော်တယ် ပုဒ်မ(၅)နဲ့
အမျိုးမျိုးဖိနှိပ်ချုပ်ချယ် ပါတီ ၇န်ဖက်တွေက အသက်အန္တရယ် ချက်ချင်းတွေ့ပါတယ် အော် အနီရောင်
် လွှမ်းတဲ့လက်ဝဲအစိုးရရယ် ကရင် မွန် ပအိုဝ်မျိုးတွေကိုကွယ် ကျူငုတ်မကျန်အောင် သတ်ချင်လွန်းလို့ရယ်
သေသူဇာနည်တွေကိုလေးစားပါလို့ရယ် သတ္တိဇွဲနဲ့နိုင်အောင်ခံမယ် နေရောင်မပေါ်မီဝယ် အမိုက်မှောင်
သတ္တိဇွဲနဲ့နိုင်အောင်ခံမယ် စောဘဦးရဲ့လေးချက်မူဝယ် တို့လက်နက်ကို အသက်ပေးလို့ရယ်
တို့လက်နက်ကိုလိုချင်ရင်ကွယ် ဟေ့ အသက်နဲ့လဲမယ် ဟေ့ ကမ္ဘာက ထင်ရှားသိအောင် ထူထောင်ကာ
ကော်သူးလေး ပြည်နယ် တို့လူမျိုးတွေ ရှေး၇ိုးအစဉ်အလာ ကိုယ့်ဝါဒ
Posted by Zarganar at 12:46 PM
တကယ်တော့ ဒီသီချင်းမရေးခင် ဗိုလ်ချုပ်ဆုံးသွားလို့ ၊ တကယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်အသက်ရှင်နေသေးရင် ဗိုလ်ချုပ်ကို ဗီလိန်တယောက်အနေနဲ့ ဒီသီချင်းထဲမှာ ထဲ့ရေးမှာ သေချာတယ်။ အစွန်းရောက်ကရင်အမျိုးသားရေးဝါဒီ တွေက ဗိုလ်ချုပ်ကို အင်္ဂလိပ် အပြေး ကရင်-ဗမာ အဓိကရုန်းမှာ အဓိကတရားခံအဖြစ် စွတ်စွဲနေကြတာ တွေရှိတယ်။ အဲဒါ လုံးဝ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ထဲ့သွင်းပေးစေလိုပါတယ်။ မဟုတ်တာကို ထပ်တလဲလဲပြောနေရင် ဟုတ်သလိုလိုကြီး ဖြစ်နေမှာ စိုးတယ်။
ပြည်သူကို ဘယ်သောအခါမှ တပါတ် မရိုက်ခဲ့
I like the words..but I can't feel the melody...anyway..that's great song....I know that the political songs are made by fusing of two waves ,..one from heart and the other from brain....
I also want to know....will there beasong like this for the burmese junta....just joking...
Thanks alot for your presenting..